Real Madrid Oo Shaacisay Masuuliyiinta Ka Qayb-geli Doona Dabbaal-degga Xafladda Koobka Haddii Ay Ku Guuleystaan - Gool24.Net
Real Madrid Oo Shaacisay Masuuliyiinta Ka Qayb-geli Doona Dabbaal-degga Xafladda Koobka Haddii Ay Ku Guuleystaan
Real Madrid ayaa xisaab ahaan horyaalka LaLiga ugu guuleysan doonta caawa haddii ay ka badiso Villarreal oo ay ku martigelinayso garoonkeeda Alfredo Di Stefano, waxaanay si buuxda u shaacisay masuuliyiinta ka qayb-geli doona xafladda ay u qabsanayaan hanashada horyaalka.
Los Blancos ayaa isla caawa hanan doonta horyaalka haddii ay Villarreal ka badiyaan ama haddii Barcelona ay dhibco lumiso.
Sida ay Real Madrid shaacisay, Antonio Gomez Reino ayaa caawa iska xaadirin doona garoonka ay ciyaartu ka dhacayso, waxaanu noqon doonaa masuulka koobka u guddoomiya marka la guddoonsiinayo Los Blancos.
Madaxweynaha Xidhiidhka kubadda cagta Spain ee Luis Rubiales ayaa ka maqnaan doona, waxaanu ku mashquulsanaan doonaa doorashada xidhiidhka dalkaas oo dhacaysa caawa, sida uu qoray wargeyska Marca.
Real Madrid oo laba sannadood ka maqnayd horyaalka waddanka Spain ee LaLiga oo ay Barcelona ku guuleysanaysay, waxa ay xili ciyaareedkan soo bandhigeen qaab ciyaareed u qalmayay, iyagoo dhamaan 36kii ciyaarood ee hore ee ay dheeleen kaliya laga dhaliyey 21 gool, halka ay 19 ciyaaroodna ay shabaqooda nadiif ka dhigeen oo aan wax goolal ah laga dhalin.
Ka sokow inay tahay kooxda goolashii ugu yaraa laga dhaliyey, uguna shabaq nadiifsan, waxa kale oo faa’iido u noqotay Barcelona oo xili ciyaareed aan wanaagsanayn qaadatay, isla markaana heerkooda gool-dhalineed iyo hannaankooda difaacuba si lama filaan ah dhulka u galay.
Lionel Messi oo tobankii xili ciyaareed ee ugu dambeeyey inta badan ku loollamayay Abaal-marinta Pichichi ee kabta dahabka ah, ayaa fasal ciyaaareedkan dhaliyey 22 gool oo kaliya, waxaanu saddex gool ka horreeyaa Karim Benzema.
Si kastaba, taageereyaasha Real Madrid ayaa isku diyaarinaya xafladda dabbaal-degga oo ay kala socon doonaan telefishannada maadaama aan loo ogolayn inay garoonka yimaaddaan.